Ny tena ilaina indrindra
« Diovy hysopa aho ho afa-pahotana, dia hadio ; sasao aho, dia ho fotsy mangatsakatsaka. » Sal: 51:7.
Ny fifohazana ho amin'ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra no zavatra tena ilaintsika sy maika indrindra ho antsika. Ny fikatsahana izany no tokony hataontsika vaindohan-draharaha. Ilaina indrindra ny ezaka atao amin-kafanam-po handraisana ny fitahian'Andriamanitra. Tsy hoe tsy maniry ny hanome ny fitahiany ho antsika tsy akory Izy fa satria isika no tsy mbola niomana handray izany. Ilay Raintsika any an-danitra dia vonona bebe kokoa hanome ny Fanahiny Masina ho an'ireo izay mangataka Aminy, mihoatra noho ny ray aman-dreny ety an-tany izay maniry ny hanome zava-tsoa ho an'ny zanany aza. Asantsika tokoa anefa, amin'ny alalan'ny fieken-keloka, ny fanetren-tena, ny fibebahana ary ny vavaka mafana, ny manatanteraka ireo fepetra izay efa narnpanantenain'Andriamanitra fa handrotsahany ny fitahiany amintsika.
Amin'ny fivavahana ihany no hisian'ny fifohazana. Rehefa tsy ao amin'ny olona ny Fanahy Masin' Andriamanitra dia tsy ho hainy ny hankasitraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa voakasiky ny herin'ny Fanahy kosa anefa ny fony dia tena hisy vokany tokoa ny lahateny izay atao. Rehefa tarihin'ny fampianaran'ny Tenin'Andriamanitra sy ny fiasan'ny Fanahiny ary ny fananana toctra maotona tanteraka ireo izay manatrika ny fivoriantsika dia hahazo fanandramana sarobidy ka ho voaomana handefa hery tsara miasa mangina rehefa mody any aminy.
Ireo efa tranainy teo amin'ny fanarahana ny fahamarinana dia mahafantatra tsara ny atao hoe mitolona amin'Andriamanitra amim-bavaka sy ny fifaliana amin'ny firotsahan'ny Fanahiny. Mandalo ihany anefa ireo, koa iza ary no hisolo ny toerany? Ahoana ny amin'ireo taranaka vao misondrotra? Miova fo ho an'Andriamanitra ye izy ireo? Efa tafafoha ve isika ny amin'ilay asa ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina ao an-danitra ao, sa mbola misy hery manosika andrasantsika hirotsaka eo amin'ny fiangonana vao ho taitra isika? Manantena ny hahita ny fiangonana fray manontolo hifoha ye isika? Tsy ho tonga na oviana na oviana izany.
Mbola misy olona tsy nova fo ao amin'ny fiangonana ary tsy handray anjara amin'ny fivavahana atao amin-kafanam-po sy amin-kitsim-po. Mila miasa isam-batan'olona mihitsy isika. Mila mivavaka misimisy kokoa isika ka ho vitsy teny.